एमालेकी सांसद चौधरीले चिनियाँ अक्सिजनको सिलिण्डर लुकाएको आरोप | SAMAJBAD
काठमाडौं । चीनले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिण्डरका केही थान सांसदको घरमा भेटिएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरिएको एक भिडियो अहिले भाइरल छ । भिडियोमा निलो रंगका सिलिण्डरहरु भुइँतलाको भर्‍याङसँगै राखिएको देखिन्छ । जनताले अक्सिजन सिलिण्डर नपाएर अस्पतालमा ज्यान गुमाइरहेको बेला सांसदले घरमा अक्सिजन सिलिण्डर थुपारेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको आवाज सो भिडियोमा सुनिन्छ । एक व्यक्ति भन्छन्, ‘सिलिण्डर देखियो घरमा लुकाएर राखेको छ ।’ अर्का व्यक्तिको आवाज सुनिन्छ– को छ यो घरमा यो सिलिण्डर कसको हो ? यो त चाइना सरकारले दिएको, माननीय सांसदले ल्याएको रहेछ,’ अलि झर्किएको भावमा अर्का व्यक्ति भन्छन्, ‘यो त चाइना सरकारले दिएको सिलिण्डर होइन ? ’
भिडियोमा फेरि आवाज सुनिन्छ, ‘बानेश्वरलाई खबर गर्नुस् र यसलाई जफत गर्नुस् ।’
करिब एक मिनेटको भिडियोमा सुनिएको आवाज हो यो । यो भिडियो सार्वजनिक भएसँगै आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया आएका छन् । भूकम्प पीडितका लागि ल्याइएको त्रिपाल सांसदहरुले लगेको घटनासँग पनि यसलाई कतिपयले तुलना गरेका छन् । उनीहरुले अक्सिजन सिलिण्डर घरमा राखेको सांसदको नाम सार्वजनिक गर्न भन्दै स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अक्सिजन सिलिण्डर घरमा भेटिएको घटनामा मुछिएकी सांसद हुन् गंगा चौधरी । उनी दाङकी एमालेकी सांसद हुन् । उनले भनिन्, ‘जनताको लागि राज्यले दिएको सम्पत्ति लुटें । अयो मेरो लागि होइन, लमही अस्पतालको लागि हो ।’
Previous articleसुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाबाट वैशाख महिनामा मात्रै २५९ जनाको मृत्यु
Next articleको ढँटुवा ? सरकार की व्यवसायी ? चीनबाट ल्याईएका सिलिण्डरमा आ-आफ्नै दाबी